‘ सरोगेसी नीति ल्याइनु हुँदैन ‘ - Enepalese.com
‘ सरोगेसी नीति ल्याइनु हुँदैन ‘
इनेप्लिज २०७२ भदौ ४ गते १०:४७ मा प्रकाशित
माफियाहरुका लागि मस्त अर्को खुशीको खबर ! अब नेपालमा सरोगेसी यानकी कोख भाडामा दिने आमा सम्बन्धि नीति आउंदैछ यसो भनौं ल्याईदैछ । अचम्म लाग्न छाडेकोछ यस्ता समाचारहरुले आजभोली । यस नीति ल्याउन बिचराहरुले भित्रभित्रै कति पापड बेलिररा होलान् ।
उहाँ मान्छे चन्द्रमामा सु-गरेर आइसके यहाँ यति जाबो भाडाको कोख अझ यसो भनुँ खनखनी पैसा गनेर बच्चा जन्माइदिने डेणे पाठेघरको कुरा उठ्नु कुन चै पहाड खस्नु हो । होइन र ! बरु अब कसरी हुन्छ भाडाको कोख बाटै एक देश चलाउने लायक नायक पनि जन्माउन पाए हुन्थियो ।
देखाउने के नै छ र बाँकी ढाक्नु ? देखिएका भन्दा नदेखियेका नग्नताको हिक्का कहालीलाग्दा छन् । तर त्यो हिक्का सुन्ने कोहि छैन यहाँ । पाए उल्टै त्यहीमाथि बलात्कार गर्नेहरु तयार छन् । देशलाई कण्डम ठानी प्रयोग गर्ने नाथेहरुले एक स्त्रीको कोख भाडामा लाउने नीति ल्याउनु कुन ठुलो कुरा भो र ! हो ल्याए हुन्छ । मजाले निर्धक्क सँग ल्याए हुन्छ ! तर देश फोहर, सालनाल फ्याक्ने डम्पिङसाइड होइन ।
यहाँ बोल्ने कोहि छैन सिवाय निरिह, मौनता । दलालहरु बाट हात लाग्ने कसिला बिटोहरु कुनै रङ्गिन अँध्यारोमा स्खलित हुँदा ती निथ्रुक्क पहाडका थुम्को छिचोल्दै घरको हट्केशमा सिंह उम्रेको भातको गाँस अड्किदा उहीं बुढी आमाले आम्खोरामा पानी दिँदा सरोगेसी पेपरमा सिग्नेचर गर्नेहरुका हात नकामुन ।
सरोगेसी एक ब्ल्याक मार्केटको रुपमा मौलाएकोछ र मालामाल हुँदैछन् दलालहरु । कुनै महिलाको कोख भाडामा लिएर जुन बच्चा जन्माउने प्रक्रिया अपनाईदैछ र नेपाल यतिखेर राम्रो ट्रान्जिट बनेकोछ यसले भोलि ठुलो बिकृति निम्त्याउनेछ । यसखाले कार्यले ती महिलाहरुको स्वास्थ्यमाथि पनि ठुलो खेलवाड भैरहेकोछ जसकारण भोलि ठुलो समस्य​नआउला भन्न सकिन्न ! विशेष गरि यस पेसामा आर्थिक रुपमा कम्जोर र अशिक्षित महिलाहरुलाइ आर्थिक प्रलोभनमा पारी प्रयोग गरिदै आएको देखिन्छ र उनीहरु पैसाकै निम्ति आफु कसैको बच्चा जन्माइदिन तयार देखिन्छन । र यसबाट सबै भन्दा अधिक फाइदा दलालहरुलाई छ यसैले उनीहरु लागिपरेका छन् सरोगेसी नीति ल्याउन ।
नेपालमा जब महाभूकम्प आयो तब इज़रायलका असली आमाबाबुहरुले भटाभट भाडामा लिएका आमाबाट आफ्नो बच्चा ओसार्न थाले । समाचार हेर्नेहरु दङ्ग परेर सोध्थे यस्तो फितलो कानून नेपालमा ? अहो गज्जब स्वर्ग रहेछ बच्चा बनाउन चाहनेको लागि त है ! सरोगेसी बारे ज्ञान समेत नभएका म जस्ता चुपचाप शीर घोसेमुन्टो लाएर बसेको स्मरणमा ताजैछ । यति सम्म सोधे कि तिमीहरुको सरकारलाई कति फाइदा हुन्छ यसबाट ?
विभिन्न समाचार माध्यम बाट जानकरी पायेनुसार आमाबाबु बन्न चाहनेले पचास देखि पचहत्तर हजार डलर सम्म पे गर्ने बुझिएको छ । र बच्चा जन्माउनेले साढे तीन देखि चार लाख (३५ देखि ४ हजार डलर) सम्म पाउने नेपालकै विभिन्न न्युज च्यानलहरुले देखाइसकेका छन् । यसरी बेवसी, अशिक्षित महिलाहरुको बाध्यतालाई अवसरको रुपमा लिएर लाखौँ फाइदा लुट्ने गिरोह यतिखेर निकै सक्रिय छन् यसो भनौं खुल्लमखुल्ला महिलाको कोखको व्यापार गरिरहेका छन् जुन अबैधानिक मात्रै होइन यो अपराध हो ।
र अर्को कुरा, यहाँ आफ्नैं जन्म दाता बाट एक छोरी सुरक्षित छैन, आफ्नैं हजुर बुवा बाट नातिनी असुरक्षित महसुस गरिरहेको अबस्था छ । आफ्नै दाजु बाट बहिनी सुरक्षित अनुभूत गर्दिन अब यस सरोगेसी नीति आएमा पुरुषले प्रधानता पाएको यस संकुचित समाजमा च्यापिएर हिडीरहेकी त्यस लंगडी नारीको मानसिकतामा कस्तो असर पर्ला ? यसबारे एक पटक बहस भएको कहिँ कतै सुनिएन । सुनियो/पढियो त वस सरोगेसी नीतिलाइ बैधानिकता दिने प्रसेस अघि बढेको छ र यो सफल हुन्छ ।
क्या बात ! स्याबास नीतिकर्ता हो !!
बधाईछ यस नीति ल्याउने प्रसेसमा हस्ताक्षर गर्नेहरुलाई । नीति ल्याउदैमा केनैपो जान्छ र ! न त शब्द घट्छ, न त सरिर । बरु फाइदै फाइदा छ । नीति ल्याउनेलाई फाइदा, बच्चा जन्माउनेलाइ फाइदा , बच्चा लिनेलाई त झनै फाइदा । नाथे नौं महिना पेटमा बच्चा बोक्नु कुन ठुलो कुरा भो र ! देशकै कानूनले मान्यता दिने भएसी के को पो पीर ! बरु अब बिस्तारै सबैले यसैलाई प्रचलन चल्तीमा ल्याए हुन्छ । झन् कति आनन्द । मोर्डन दम्पतिलाई बच्चा पाउन बाट गज्जबको उन्मुक्ति ।
अब त्यो समय आउनु धेरै बेर लाग्ने छैन ! कुनै वस्तु झैं हर स्त्रीको अङ्ग , प्रत्यङ्गको बोलि खुल्ला चौरमा एक, दुई, तीन, चार , पाँच गरि लगाइनेछ अनि कुनै सभा-सम्मेलनमा गएर नारी सम्मानताको भाषण ठोकिनेछ ।
बास्तवमा, सरोगेसी बारे हामी कत्तिलाई जानकारी सम्म पनि थिएन जब देशमा महाबिपत्ति ”भूकम्प” आयो अनि एकाएक यस घटनाको पर्दा उघ्रियो । मेरो एक बिदेशी साथीले सोधिन् अरे तिम्रो देशमा त भाडामा बच्चा जन्माउने आमा पाइँदो रछ लौ न सुत्र बताइदेउ । म अलमल्लमा परे । सुरुमा म आफैं अनविज्ञ थिएँ यसबारे र बुझ्दै गएर पछी मात्रै जवाफ दिएँ यो अबैधानिक कार्य हो ।
अचेल सामान्य मान्छेले रक्सि पिएको छ कि छैन भन्ने थाहा हुन्छ तर भारत, दार्जिलिंग लगायतबाट बकैदा महिलाहरु भित्र्याएर यस्ता अबैधानीक कार्य भएको भने कसैले सुइँको सम्म पाउंदैन , क्या गज्जबछ बा ! जब थाहा हुन्छ अन्तराष्ट्रिय स्तरमै प्रश्न उठ्छ अनि आलेटाले गर्दै अझ कानून ल्याउने कुरा अघि सारिन्छ र त्यस्ले बैधानिकता पाउने सम्भावना बढ्छ । लाग्छ यो माटो नारी उभिनको लागि बनेको होइन वस मात्र पोरुषले उधिन्नको लागि हो । अहिले यस्तो लाग्दैछ सम्बन्धित निकायलाई आधा इन्च पनि शरम रहेनछ । हुँदो हो त यस्ता कार्य गर्नेलाइ कडा कानूनको दायरा ल्याउनेथे नकी नीति ।
नारी , एक नारी मात्रै होइन उनि आमा हुन् , छोरी हुन् , पत्नी हुन् , ममताकी खानि हुन्, धर्ति हुन् , यस सृष्टि सञ्चालक हुन् । तर उनलाई एक खेलौना झैं किन खेलाइन्छ ? कुनै वस्तुझैं उनको मोलमोलाई किन गरिन्छ ? अब उनको पाठेघरको मूल्य तोक्ने नीति आउदैछ , भोलि उनको अर्को अङ्गको खुलमखुल्ला मूल्य तोक्ने नीति नआउला भनि ढुक्क हुने स्थिति रहेन । बास्तवमै यस्तो कुराले सम्पूर्ण नारीको अपमान गरेको छ । र, एक सस्तो खेलौना साबित गरिदिएको छ । यदि सरोगेसी (कोख भाडामा दिने आमा) नीति ल्याइएमा भोली यसले ठुलो बिकृति निम्त्याउनेछ यसैले यो नीति ल्याइनु हुँदैन ।